7 Best Ukhenketho Ukuhamba Free EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 7 Best Ukhenketho Ukuhamba Free EYurophu
Kukho iincwadi ezingenakubalwa ezinengcebiso kunye neengcebiso ngalo naluphi na uhlobo lohambo oluya eYurophu, kwaye naluphi na uhlobo lokuhamba. Ezi ncwadi zesikhokelo zilungele ukufunda ngembali nenkcubeko, kodwa abayi kukuxelela malunga neengcebiso zangaphakathi zeYurophu. Iihambo zokuhamba simahla ziyindlela entle yokufumana iYurophu, kwaye uya kufumana ukhenketho lwedolophu yasimahla kwisixeko ngasinye saseYurophu.
Nxiba izihlangu ezintle, kuba sisuka kuhambo oluya e 7 okona hambo luhamba simahla eYurophu.
1. Prague IsiXeko esiSimahla sokuHamba kweSixeko
Isikhokelo esithetha isiNgesi siya kudibana nawe Iinanhostele ihostele kwidolophu yakudala ye 2.5 Iiyure zokuhambahamba ujikeleze iPrague. Uya kuqala ukhenketho lokuhamba kwi isikwere esidumileyo saseKapa, qhubeka uye kwi-icon yeCharles Bridge. Ukusuka kwiziko labakhenkethi ukuya kwiindawo ezilungileyo zesixeko sasemini neziselo, I-Prague's do's kwaye ayenzi, Uya kulugqiba uhambo ngeetoni zeengcebiso kunye namabali ongasoze ufunde ngawo kwiincwadi zesikhokelo.
Prague's free city ukuhamba ukhenketho yenye ye 7 Ukuhambahamba kakhulu eYurophu, ngenxa yesikhokelo esikhethekileyo. Uya kulushiya ukhenketho luvuyele ukufumana iPrague, kunye noluhlu olukhulu lweeresityu ezinikezela ngeemenyu zesidlo sasemini ezifikelelekayo. Ukwengeza, Uya kufunda malunga nokubhabha ngeyona nto ibalaseleyo yobugcisa baseCzech, kunye neyona miboniso mihle yePrague.
2. Amsterdam, elamaDatshi
Ukhenketho lokuhamba simahla eAmsterdam, Ikwabizwa ngokuba luhambo lokuhambahamba kwesixeko saseFreeDam, konke malunga nokufumanisa kunye nokonwabela esona sixeko sikhululekileyo eYurophu. Ukhenketho luhamba yonke imihla ukusuka kwindawo yokuhlangana kwiStock Exchange kwiholide yokuhamba iiyure ezi-3, ukusuka kwiimbali zase-Old Amsterdam ukuya kumabali ase-Amsterdam anamhlanje kwaye ahamba phambili.
Ngexesha loku 3 iiyure ezimnandi, uya kudibana nabahambi abavela kwihlabathi liphela kwaye ufunde ngomgaqo-nkqubo weziyobisi wase-Amsterdam, izithili ezibomvu, ezopolitiko, kunye nembali evela kwizikhokelo’ amabali ahlekisayo. Ukwengeza, kukhenketho lokuhamba simahla, Unokufumana iingcebiso zangaphakathi kwisikhokelo olona hambo lusuku luhle luvela eAmsterdam nakwiYurophu iphela.
3. I-Berlin ehamba phambili kwiSixeko soKhenketho lokuHamba
Ukhenketho lokuqala lwaseBerlin lokuhamba simahla yeyona ndlela yokufumana imbali yesixeko, Iimpawu zomhlaba, kunye nokuqaqamba kwiiyure ezimbalwa. Luhambo olukhulu lokuqalisa ukuya kwesinye sezona zixeko zihle eJamani, ngembali etyebileyo, nezopolitiko.
Ukongeza kwiimbali eziphambili, IBerlin ibonelela ngeekhenketho ezahlukeneyo eziza kubonisa iBerlin ivela kwii-engile ezahlukeneyo; ubugcisa, ukutyazana, okanye iziselo ezingaphakathi. kutyelelo lwasimahla lwedolophu yaseBerlin, uza kutyelela 6 kweempawu eziphambili zeBerlin, kwaye uve malunga namabali angasemva kodonga nenkcubeko yaseBerlin.
Isixeko sokuqala saseBerlin esihamba simahla sishiya kabini ngemini, ukusuka kwindawo yokuhlangana e “Uhlahlo-lwabiwo mali”. Isikhokelo siya kulinda kwi-t-shirt yaseBerlin yokuqala yokuhamba simahla kwaye ndingakuvuyela ukucebisa ngeendawo ezilungileyo zepati esixekweni., nendlela yokwenza ukuhamba ukusuka eBerlin ukuya kwezinye iidolophu ezinkulu eJamani noovimba besizwe.
EFrankfurt ukuya eBerlin Amaxabiso oLoliwe
Leipzig ukuya eBerlin Amaxabiso oLoliwe
IHanover ukuya eBerlin Amaxabiso oLoliwe
IHamburg ukuya eBerlin Amaxabiso oololiwe
4. Venice, ElamaTaliyane
IVenice sesinye sezona zixeko zincinci zincinci e-Itali. Na lyo line, Kulula kakhulu ukulahleka xa uzula-zula kwiindlela zayo ezimxinwa kwaye izakhiwo omangalisayo. Isixeko sokuhamba ngokukhululeka saseVenice siya kukukhokelela kwimbali, isiko, art, Uyilo loyilo kwi 2.5 ukhenketho lweeyure. Isikhokelo esithandekayo uSimona siza kukuxelela konke malunga nesixeko, kwase, kunye neendawo zothando.
Ukuqaqanjelwa kukhenketho lokuhamba simahla eVenice yiSimona, isikhokelo, kunye nomoya omnandi. Nokuba kunethini, inani labantu, Uya kuba nexesha elimnandi kwaye ufumane iingcebiso ezininzi Ukutya kwaseNtaliyane neziselo Eprol eVenice.
I-Treviso ukuya kwiVenice yamaXabiso oLoliwe
5. IParis yokuHamba kweSixeko esiSimahla
IParis yenye yeedolophu zabakhenkethi eYurophu, ndingathethi ke ehlabathini. Xa i-Eiffel Tower kunye neAvenue des Champs-Elysees zigcwele ngabakhenkethi, Kunzima ukonwabela umlingo weendawo ezibonakalayo zedolophu. kodwa, kukhenketho lokuhamba simahla, Isikhokelo sakho siya kuqinisekisa ukuba uza kufumana ezona ndawo zibalulekileyo, kunye nezinye ezininzi kukhenketho olukhethekileyo.
IParis likhaya kwiigugu ezininzi ezifihliweyo, kungoko inani lokhenketho lokuhamba simahla alunasiphelo. Kukho ukhenketho emini nasebusuku, ukhenketho lwommandla wonke, ukhenketho lokupheka kunye nobugcisa. kunjalo, olona hambo lwesixeko sokuhamba simahla eParis ubuncwane obufihliweyo kunye nohambo oluyimfihlo lwaseParis. Isikhokelo siya kukuthatha kwiindinyana ezifihliweyo zeLouvre, izakhiwo zokufihla amabala emifanekiso, kude nezihlwele nakwintliziyo yeParis.
6. Zurich Chocolate Simahla
Ukongeza kwisikhokelo esihle kwaye esimnandi, Isixeko saseZurich esona sikhululekileyo sokuhamba ukhenketho ngamazulu okupheka. Kutheni uhamba ngedolophu endala kunye neZurich eziqaqambileyo kwisitayela sendabuko, xa ungayinonga ngetshokholethi yaseSwitzerland. Ngcamla truffles, funda malunga nokutsalwa kwecocoa kwaye undwendwele Iitshokholethi ezilungileyo eYurophu njengokuba ubabaza icawe yaseLindenhof neyeGrossmunster.
Ukhenketho lokuhamba simahla lwaseZurich 2 iiyure ezinde kwaye ihamba yonke iMigqibelo ukusuka eParadeplatz, kwaye akukho mfuneko yokubhalisa.
ILugano ukuya kwiZurich Amaxabiso oololiwe
7. Vienna, Ostriya
Eyona ndlela yokuqalisa ukuhlola iVienna kukwamkelwa eVienna simahla isixeko sokuhamba ukhenketho. Malunga 2 iiyure uza kufumana imbali emfutshane yaseVienna kunye neempawu zayo eziphambili, apho ungangcamla ukutya kwaseViennese kwisidlo sasemini ukusuka eMarina, esinye sezona zikhokelo zibalaseleyo eVienna.
Kabini ngemini, Isikhokelo siya kukulinda e-Albertina isikwere kutyelelo lwembali olujikeleze iVienna.
Eyona nto intle malunga nokuhamba simahla kukhenketho sisikhokelo. Ngelixa uninzi lokhenketho lungesiNgesi, Isikhokelo siya kuhambisa yonke into oyifunayo malunga nesi sixeko ngesiNgesi esihle. Yonke imibuzo iya kuphendulwa kwaye uya kugqiba ukhenketho ngeengcebiso ezimangalisayo, ii-anecdotes, kunye nolwazi malunga nesixeko. Into yesibini elungileyo kukuba 7 ezona dolophu zihamba kakuhle eYurophu, kukuba bakhululekile, mfutshane kwaye inqaku, kunye nokubandakanya.
UkuHamba kweSixeko ngokuSimahla kwii-FAQs zaseYurophu
Ngaba Olu Hambo lokuHamba ngokuSimahla luSimahla?
Ukuhamba kweedolophu zasimahla kutyelelo kusekwe kwingcebiso. Intsingiselo, awudingi ukubhukisha indawo kutyelelo lokuhlawula, kodwa ekupheleni kokhenketho, Kuya kufuneka ubulele isikhokelo esikhulu ngokucofa.
Ndifuna Ingakanani Ingcebiso?
Ukuthimba kuyahluka ngokweedolophu, kodwa kwi-avareji incam yi- € 5 ukuya kwi- € 15.
Ndisifumana njani isikhokelo?
Izikhokelo zokuhamba ngesixeko simahla ziya kudibana nawe kwiindawo zentlanganiso esembindini, kwaye uya kubaqonda ngehempe zabo. Ukwengeza, Ngokuqinisekileyo baya kuza bakubulise.
Ngaba kukho uKhenketho lokuHamba kwezinye iiLwimi ngaphandle kwesiNgesi?
Uninzi lweekhenketho zokuhamba ngokukhululeka eYurophu zinika ukhenketho ngesiNgesi nakulwimi lwasekhaya, nohambo ezimbalwa kwezinye iilwimi. Oku kuyahluka ngokweedolophu, kunye nabakhenkethi.
Apha Gcina A Isitimela, Siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo lwakho ukuya kwizixeko zaseYurophu ehamba hamba ngololiwe.
Ngaba ufuna ukufaka i-post yethu yeblogi "I-7 yeeNdwendwe ezihamba ngokukhululekileyo eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-free-walking-tours-europe/?lang=xh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / zh-CN ukuya fr / okanye / iilwimi de nangaphezulu.
#traveleurope #uhambo lokuhamba elikwidolophu I-Europefreewalkingtours train Travel umhambi UkutyaPrague UkuThoAmsterdam UkuTaParis